Afar Apps oo aan aad loo aqoon balse aad u faa'iido badan Google oo loogu talagalay Android | Androidsis
Wax yar oo la yaqaan laakiin aad u faa'iido badan barnaamijyada Google Android
Google waxay leedahay codsiyo aad u tiro badan oo loo heli karo Android. Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa lagu rakibay si toos ah taleefannada leh nidaamka qalliinka, dhab ahaantii Android One waa kuwa kaliya ee soo socda. In kasta oo ay hayaan tiro badan oo barnaamijyo ah oo la heli karo, haddana waxaa jira qaar aan wax badan laga aqoon qayb weyn oo ka mid ah dadka isticmaala, in kasta oo ay xaqiiqda tahay inay yihiin barnaamijyada ugu waxtarka badan.
Sidaa darteed, hoosta waxaan ka hadli doonaa qaar ka mid ah barnaamijyadan ay Google u diyaarisay Android. Kuwa aan la aqoon inta badan dadka isticmaala nidaamka hawlgalka, laakiin taasi faa iido badan ayey yeelan kartaa dadka isticmaala. Waa maxay barnaamijyada aan ku jirno liiska?
1 Safarada Google
2 Desktop fog Google
3 Xog ahaan
Waxaa jira qaar ka mid ah barnaamijyadooda kuwaas oo ah lagama maarmaan u ah markaad safar aadayso. Liiskan waa inaan ku darno Google Trips, oo ah barnaamij in muddo ahba u diyaar ahaa Android isla markaana aan ka mid ahayn kuwa ugu caansan shirkadda, in kasta oo ay siin karto dadka isticmaala ciyaaro badan. Waa barnaamij taas waxay na siisaa talooyin iyo talooyin boggag ah oo aan ku aragno halkayagu ku nasanayo Marka waxaan adeegsan karnaa Khariidado, si aan u helno fasax wanaagsan.
Wadooyinka iyo talooyinka ayaa lagu muujiyay. Waxay noqon karaan kuwo waxtar weyn u leh guuritaankae magaalo aad safrayso. Marka, awood u lahaanshaha inaad ku aragto meelaha ugu xiisaha badan ama ugu muhiimsan meeshaas. Si fudud loo isticmaalo, oo leh interface fiican oo aad waxtar u leh.
Desktop fog Google
Waad ka xakameyn kartaa kombiyuutarkaaga taleefankaaga Android. Tani waa suurtagal mahadsanid barnaamij loo yaqaan 'desktop desktop', oo laga yaabo inay u muuqato qaar idinka mid ah aqoon. Xitaa waxaa jira barnaamijyo u oggolow hawsha ka soo horjeedda. Waa fududahay in la isticmaalo loona habeeyo app, kaas oo waxtar yeelan kara haddii ay dhacdo inaan ku tashanno wax kumbuyuutarka ah ama aan raadino feyl waqti go'an, laakiin ma haysanno kumbuyuutarka nala. Waxay kaa saari kartaa wax ka badan hal dhibaato si dhab ah oo raaxo leh.
Haddii aad leedahay kombiyuutar Windows ah, wax dhibaato ah kala kulmi maysid markaad adeegsanayso barnaamijkan. Kumbuyuutarka waxaad u baahan doontaa inaad ku dhejisato kordhin, taas oo aan ku qaadan doonin waqti kugu filan. Barnaamij kale oo weyn oo Google ah oo aad waxtar u leh.
Codsi ka mid ah waan kula soo hadalnay munaasabado kala duwan tan iyo markii la bilaabay Android. Waa barnaamij ay Google wax ku raadiso ka caawi dadka isticmaala inay xakameeyaan oo yareeyaan isticmaalka xogta moobiilka. Waxay bixisaa raadraaca isticmaalka saxda ah, markaa waad arki kartaa wakhti kasta haddii aad qarash gareyneyso xog ka badan intaad moodeysay. Waxaa loo adeegsadaa wax badan markay tahay maamul isticmaalka ama haa waxaad rabtaa inaad ogaato waxa app ah waa midda inta badan cunaysa.
Sidoo kale, barnaamijkan waa la falanqeeyay shabakadda kore. Waa ikhtiyaar fudud, oo leh hawlgal aan soo bandhigin wax dhib ah, laakiin taasi way noqon kartaa caawimaad badan oo badan oo isticmaala Android ah. Waxay u badan tahay inuu yahay barnaamijka ugu caansan Google ee liiska ku jira, laakiin aan waxtar u lahayn taas.
Datalin ahaan: barnaamijka keydinta xogta ee Google
Codsi laga yaabo inuusan u muuqan sida isticmaaleyaal badan, laakiin taasi sidoo kale waxay ka timid Google. Haddii aad rabto inaad sawirro sawirro duug ah, hawshu waa gaabis waxayna noqon kartaa mid daallan marar badan. Muxuu codsigan sameeyaa waa in howshan ay tahay mid aad u fudud markasta. Maaddaama ay kamaradda taleefanka u rogayso iskaan-qaade, sida barnaamijyada lagu sawiro dukumiintiyada. Xaaladdan oo kale, waxaad awoodi doontaa inaad sawir fiican ka qaaddo / iskaanka sawir la sheegay. Sidan oo kale, waxay noqon doontaa suurtagal in lagu sawiro lambarro qaab aad u fudud.
Waa barnaamij si fiican u shaqeeya oo wax siiya natiijooyin wanaagsan marka lagaa qaadayo sawirrada noocaas ah. In kasta oo ay muhiim tahay in loo adeegsado xaaladaha iftiinka wanaagsan, si tayo wanaagsan looga helo hawshan.
FotoScan oo ka yimid Sawirrada Google
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Wax yar oo la yaqaan laakiin aad u faa'iido badan barnaamijyada Google Android
Intel, Mediatek iyo Qualcomm, waa saddexda shirkadood ee kor u qaadi doona shabakadda 5G ee leh qalabka loo yaqaan 'chipset'